Hayyuu -Herrega Qusannaa Barnootaa - Oromia International Bank
Hayyuu -Herrega Qusannaa Barnootaa
Herregni qusannaa addaa kun barattoonni barmoota olaanaa (kolleejjii ykn yunivarsiitii) barachuuf ykn ‘cost share’ kaffalluuf kan qusatan irraa bifa liqiin argachuuf isaan fayyada.
Herrega kana irratti dhalli kan herregamu haala idileetiin. Namni herrega kana banatu galii dhaabbataa qabaachuu qaba. Liqiin kan kennamu akkaataa imammata liqii baankichaatti qabsiisni(collateral) dhiyaachuu qaba.
Tajaajila liqaa argachuuf herregichi yoo xiqqaate waggaa tokko turuu qaba
Herregichi Dabtara qusannoon ykn ATM ni rsocho’a.
Herregichi dhalli idilee kan itti herregamudha.
Herrega qusannoo kana namni banataa qabaachuu qaba.
Barattootni Digirii 2ffaa (PHD) barachuu barbaadan liqaa argachuu danda’u
Barattootni Digirii 2ffaa (PHD) tajaajila liqaa ykn kaffaltii baasii qooddachuu ittiin argatu
Liqaan kan kennamu akkaataa seera liqaan liqaa fudhatama qabu wabii(Collateral) kan maallaqaa barbaadamu kuufamaan yoo jiraatedha.